(DHEGAYSO) Madaxweyne Gaas oo Turkiga ku dhaliilay inuu mashaariicdii soo dhaafin waayay Xamar. | puntlandi.com
(DHEGAYSO) Madaxweyne Gaas oo Turkiga ku dhaliilay inuu mashaariicdii soo dhaafin waayay Xamar.
Madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa ku dhaliilay dowladda Turkiga inay mashaariicdooda Soomaaliya soo ku ekeeysay Xamar iyo xayndaabkeeda, isagoo sheegay inaysan ogayn in dalku yahay federal.
Madaxweyne Gaas ayaa sheegay inuu safiirka Turkiga kula kulmay Xamar oo uu u sheegay inay mashaariicdooda gaarsiyaan Puntand isagoo sheegay madaxweynuhu inuu xasuusiyay safiirku inay horey u balanqaadeen in hay’addooda xarumarinta ee TIKA xafiis weyn ka furanayso Puntland.
Halkaan ka dhageyso codka Gaas.